PON နှင့် EOC ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | China PON နှင့် EOC စက်ရုံ
FTTH GPON ONU ZM2 စီးရီး
နိဒါန်း 1. FTTH GPON ONU စီးရီး။ 2. ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအရွယ်အစား၊ ပရိတ်သတ်များနှင့်ဆူညံသံမရှိပါ။ လွယ်ကူသောလည်ပတ်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အတူလုပ်ဆောင်ချက်များစွာ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုနှင့်လုံခြုံမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်၎င်းတို့သည်ဘုံဖွင့်ထားသောဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲဆိုင်ရာဗိသုကာကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ချက်အမျိုးမျိုးနှင့် FTTH အခြေအနေများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝိသေသလက္ခဏာများ ၁။ ITU-T G.984 GPON စံနှုန်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၂။ GEM ဆိပ်ကမ်းနှင့် T-CONT အကြားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောမြေပုံတစ်ခု။ ၃ ။
ZJ5610-GL စီးရီးစမတ်ကက်ဆက် GPON OLT
ကုန်ပစ္စည်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ZJ5610-GL သည် GPON OLT ၏သေးငယ်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တိုးမြှင့်မှုစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ITU-T G.984 / G.988 နှင့် China Telecom / Unicom GPON ၏မြင့်မားသော GPON ဆက်သွယ်မှုစွမ်းရည်၊ carrier-class ယုံကြည်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလုံခြုံရေး function ကို။ ၎င်းသည်၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သောစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုစွမ်းရည်၊ များစွာသော ၀ န်ဆောင်မှုအင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောကွန်ယက်တို့ကြောင့်အကွာအဝေးအဝေးမှ optical fiber ကိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ZJ5610-GL သည် ... ဖြစ်နိုင်သည်